Eric Cantona oo Zlatan Ibrahimovic u sheegay inuusan boqor ka noqon karin Manchester & Jawaabtii uu bixiyay weeraryahanka Milan oo… – Gool FM
Eric Cantona oo Zlatan Ibrahimovic u sheegay inuusan boqor ka noqon karin Manchester & Jawaabtii uu bixiyay weeraryahanka Milan oo…
(Milan) 06 Okt 2021. Weeraryahanka kooxda kubadda cagta AC Milan ee Zlatan Ibrahimovic ayaa isagoo wali ku jira maalmaha dabaal-degga sanadguuradiisa 40-aad ee dhalashadiisa waxa uu wareysi uu bixiyay uu daaha kaga qaaday mar ay wada hadleen isaga iyo halyeyga naadiga Manchester United ee Eric Cantona.
Halyeyga Sweden ee haatan wali garoommada kubadda cagta ku jira ayaa u sheegay Cantona inuu u yimid Old Trafford inuu dhaafo darajada uu ku leeyahay Man United kaddib markii Zlatan uu si bilaash ah ugu soo biiray Red Devils xagaagii 2016 markaas oo uu qaab xor ah kaga dhaqaaqay Paris Saint-Germain heshiiskiisa oo dhacay awgeed.
“Maalin ayuu Cantona isoo wacay waxaana uu igu yiri: ‘ma noqon kartid boqorka Manchester, waa inaad ahaataa boqor-yaraha'” ayuu Ibrahimovic u sheegay warbaahinta Taliyaaniga ah ee Le lene.
Waxaana uu weeraryahanka 40-sano jirka ah intaas sii raaciyay: “Balse waxaan aniga ugu jawaabay ‘ma noqon doono boqorka Manchester ee waxaan noqon doonaa rabbiga Manchester'” waa sida uu Zlatan u yiri.
Si kastaba ha ahaatee, Ibrahimovic ayaa waqti labaad ku qaadanaya AC Milan isagoo bishii January ee 2020 kusoo laabtay San Siro oo uu hore Rossoneri ugu matalay intii u dhexeysay 2010 illaa 2012, sidoo kalena waxa uu laba xilli ciyaareed kusoo qaatay Man United inkastoo uu fasalkiisii labaad la dagay dhaawac jilibka ah sidaas oo ay tahayna waxa uu u dhaliyay 29 gool kaddib 59 ciyaarood dhammaan tartammada.
Dhinaca kale, Cantona ayaa Manchester United u ciyaaray muddo shan xilli ciyaareed ah isagoo kula guuleystay afar jeer horyaalka Premier League waxaana xiddigii hore ee France uu mar ku guuleystay abaal-marinta PFA Players’ Player Of The Year.
Italy vs Spain: Horudhaca kulanka afar-dhammaadka UEFA Nations League... (Xogta tartankan, sida ay halkan kusoo gaareen & Goobta lagu ciyaarayo)